Wholesale BT-303 Polycarboxylate Superplasticizer 40% (Super inononoka kuburitsa slump yekuchengetedza mhando) fekitori uye vagadziri | Gaoqiang
BT-303 Polycarboxylate Superplasticizer 40% (Super inononoka kuburitsa slump yekuchengetedza mhando)
BT-303 chizvarwa chitsva chekunonoka kuburitsa uye kutsvedza kunochengeta amai doro rinogadzirwa kubva TPEG nekumahara kwakanyanya kupolimisa, uye boka idzva rakaburitswa-rakaburitswa rinounzwa mukutanga.
BT-303 chizvarwa chitsva chekunonoka kuburitsa uye kutsvedza kunochengeta amai doro rinogadzirwa kubva TPEG nekumahara kwakanyanya kupolimisa, uye boka idzva rakaburitswa-rakaburitswa rinounzwa mukutanga. Pasi pemamiriro ealkaline ekongiri, iro rinononoka-kuburitsa boka mune mamorekuru chimiro chechigadzirwa ichi rinogona kusunungura zvishoma nezvishoma boka riine basa rakapararira, richiita basa rekuenderera mberi nekuparadzira simende, kuti riite basa rekudzivirira iyo kongiri yekudonha kurasikirwa Iyo ine yakaderera yekudzikisira mvura chiyero, asi ine yakanyanya yakanyanya slump kuchengetedza mashandiro. Inonyanya kushandiswa mune yakasimba-kongiri yekongiri ine yakakwira zvinodiwa kune yekutsika dziviriro mashandiro, uye zvigadzirwa zvaro zvinoshandiswa zvakanyanya mukupomba kongiri, super-kuyerera -kuzvimanikidza uye yakakwirira-simba yakakwira-kuita kongiri uye yekutengesa kongiri yeiyo yekumhanyisa njanji, Expressway, hydro-simba uye mamwe makuru mapurojekiti einjiniya.
1.With yakakwira yakakwenenzvera mashandiro, inogona kurega iyo kongiri idonhe 2h pasina kurasikirwa
2.Low yekudzikisa mvura chiyero haiwanzoshandiswa chete, inoda kusanganiswa nemhando yekudzikisa mvura rudzi amai doro.
3.With yakaderera viscosity uye thixotropy, inokodzera kongiri ine yakaderera mvura simende ratio
4.Nguva yekuburitsa inononoka kupfuura iyo yeBT-302, kazhinji mushure meawa rimwe (pamwe nekushandurwa kwekongiri zvinhu, pachave nekumwe kuchinja).
Zviri Mukati 40±1
Simende fluidity MM 270mm paawa
3. Inoshanda kune ese marudzi eindasitiri uye ehurumende kuvaka uye yekutengesa kongiri inosanganisa zviteshi.
1.This chigadzirwa hachina ruvara kana chakajeka yero mvura. Chipimo chemushonga:Kazhinji ，shandisa 0-30% amai doro nekudzora mvura amai doro, uye sanganisa zvimwe zvidiki zvinhu kugadzira mvura yekudzikisa mumiririri. Muyero wemumvura-unodzora mumiririri unowanzo kuve 1% ~ 3% yehuremu hwese hwekusimbisa zvinhu.
2.Usati washandisa chigadzirwa ichi kana kushandura mhando uye batch yesimendi uye mavhu, zvakakosha kuita bvunzo yekuchinja nesimende uye nejecha. Zvinoenderana nemuyedzo, gadzira chikamu chemvura inoderedza mumiririri
Pashure: BT-302 Polycarboxylate superplasticizer 40% (Yakakwira slump yekuchengetedza mhando)
Zvadaro: Polycarboxylate Superplasticizer Powder
Polycarboxylate Yakavakirwa Superplasticizer
Yakajairika Rudzi Polycarboxylate Superplasticizer